Abavelisi bentsimbi engenasitali nabathengisi | Yongeza
Isibambo sentsimbi engenasitali sisibonelelo sefenitshala esinyanzelekileyo sokuhombisa ifenitshala, elungele ukuvula ucango lweKhabhinethi kunye ne-cawer ngokukhululekileyo. Kwimifanekiso emininzi, mhlawumbi ucinga ukuba idlala indima encinci. Nangona kunjalo, isiphatho esitsha unganceda iingcango zakho, iikhavathi, iiwadi zinembonakalo entsha.
I-Addith Stainess Stails yeyona nto iphambili kuwe. Isiqinisekiso sethu seziphatho zibandakanya iintlobo ezahlukeneyo ezahlukeneyo: I-ZINC ALTLES, izithambisi zentsimbi, izixhobo zentsimbi ezingenamsebenzi, zibonelela ngeentlobo ezahlukeneyo zeziphatho kunye neempawu ezahlukeneyo hlangabeza iimfuno zakho. Zonke iimveliso zethu ziye zavavanywa kwe-SGS ezingqongqo, kwaye isibambo ngasinye sihlolwe ngokungqongqo.
I-Addith Stainess Stainess inokubonelela ngexabiso lakho eliluncedo kunye nomgangatho ophezulu ovumela uvavanyo olusemgangathweni kwaye kukuzisa kunye nabathengi bakho abathi bathenga.
I-Addith Stainess Staines eziveliswe ngentsimbi engapheliyo esezantsi njengezixhobo ezingafunekiyo, unyango olululo lwezinto ezinqabileyo, zisenza ukuba zibuze kwaye ziphucule amandla okuxhathisa ityuwa yokutshiza. Isitayile soyilo sisemhla, silula kwaye siqine kwaye sinokusetyenziswa kwizitayile ezahlukeneyo zefanitshala, engaphelelanga sisitayile sobuhlobiso.
Imibala eyahlukeneyo inokwenziwa njengokhetho lwabathengi, imibala emininzi ukuze ukhethe, njenge SSS / PSS / PVD / AB / AB / AB / AB / AB. Iintlobo ngeentlobo zobungakanani ezahlukeneyo zemibhobho kunye nomngxunya osithandayo. Isicelo se-Supine-Schone, silungele ukusetyenziswa kwefanitshala enkulu njengeewadi, iincwadana. Xhasa ukugcwalisa ngokwezifiso ezikhethekileyo, unokuhambelana nomthengi'Umgama we-Hole, umbala, ubungakanani bomgangatho, ukuveliswa kweemodeli zesiko sokutsala.